Ukuphupha ngeShroud Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngokwesiqhelo, umfi usongelwa ngengubo yokungcwaba. Abafileyo kwizibhedlele bahlala begqunywa ngephepha elilula, abathi abangcwabi balisuse ngengubo. Eli laphu lidla ngokwenziwa ngomqhaphu, ilinen okanye isilika.
Amanqwanqwa ahlala emhlophe kwaye akukho zixhobo zokuhombisa. Oku kulula kwenzelwe ukubonisa ukuba bonke abantu bayalingana phambi koThixo. Nangona kunjalo, ukuba isigqubuthelo sihonjisiwe, sihlala sineepatheni ezibanzi okanye ngemisonto ekhethekileyo okanye imibala, enjengegolide okanye isilivere.
Ingubo yaseTurin ngokungathandabuzekiyo yenye yezona ndawo zidumileyo zokugquma. Oku kuhlonishwa njenge-relic kuba kuthiwa uYesu wayesongelwe kuyo emva kokufa kwakhe.
Kodwa kutheni ngoku ubona isigqubuthelo ephupheni? Nguwuphi umyalezo onokufihlwa ngasemva kwawo?
1 Uphawu lwephupha «Isigqubuthelo» - Ukutolikwa ngokubanzi.
3 Uphawu lwephupha «Shroud» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Isigqubuthelo» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Kwinqanaba eliqhelekileyo lokuchazwa kwephupha, isigqubuthelo sinokubonisa ephupheni ukuba umntu ophuphayo angabubona ubuyena bakhe ekuvuseni ubomi phambi kwendalo yakhe. fihla Ndingathanda. Inokuba neepropathi ongafuniyo ukuzibonisa.
Ukuba ubona isigqubuthelo ephupheni lakho, kunokwenzeka ukuba ujongane nesifo esinexhala kunye noloyiko olunokuhambelana. Kwakhona, le meko yamaphupha ukuhluleka okanye kubangele ukuphazamiseka kwimeko yoshishino.
Izidumbu ezigqunywe ngesigqubuthelo ngexesha lokulala zinokuba nezinto ezininzi Amashwa qikelela ngokuvuka kobomi. Ukuba umphuphi ususa isigqubuthelo emntwini ofileyo okanye isidumbu ephupheni lakhe, kuya kufuneka alungiselele umlo onokubangela uxinzelelo kwisangqa sabahlobo.
Ukuba ubona ongasekhoyo ephupheni kwindawo yokugcina izidumbu esongelwe ngengubo, ngokwenkcazo ngokubanzi yephupha, kuya kufuneka ulumke malunga nabahlobo bobuxoki kwi el mundo ngokwenene. Ukuba umntu oleleyo usongela omnye umntu ngengubo ephupheni lakhe, enye ebalulekileyo kuye iya kuphuma kungekudala. isigqibo ngenxa ye.
Ukuba isigqubuthelo sibonakala ephupheni ngokunxulumene nebhokisi, oku kunokwenziwa ngokwakho. ukubhubha Iingoma. Umphuphi kufuneka ayazi le nto okanye ajongane nesi sihloko. Ukuba ubona abantu abafileyo ephupheni besongelwe ngamalaphu emva kobhubhane okanye ubhubhane wesibetho, izicwangciso zeshishini ngekhe zikhule ngendlela efunwayo.
Isigqubuthelo sinokuvela ephupheni kwimeko yezonyango, umzekelo, kunyango lwasenkundleni. Kungenxa yokuba apha izidumbu zigutyungelwe enye emva koqhaqho lwesidumbu okanye emva kokuqhaqha. Ukuba kunjalo, umphuphi kufuneka ayazi kakuhle ingqondo yakhe yohlalutyo.
Ngokwengqondo, umfanekiso wephupha "lokugubungela" unokuvela Iimfihlakalo bhekisa kumntu oleleyo. Ezi kunokuba ziimpazamo ezidlulileyo okanye iimpawu zempawu ezicinezelweyo. Ubudlelwane phakathi kwabantu bunokufihlwa ngasemva kwakhe, obaphelisa ngabaphupha ngabom.
Ukuba elo laphu lisuswe kuwe ngokulala ngelixa ulele, kuya kufuneka uboniswe ukuba uzimisele ukujongana neemfihlo zakho ezifihlakeleyo ukuza kuthi ga ngoku.
Ukuba umphuphi walungisa isigqubuthelo ephupheni lakhe, kufanelekile ukuba sibe sesakhe Umonde yazi ngemicimbi ethile kwilizwe eliphaphamayo. Umzekelo wokugcotywa kufuneka uqwalaselwe apha. Kuba isenokuba nezinye iinkcukacha ezibalulekileyo.
Umzekelo okhumbuza umhombiso unokuqondwa apha, umzekelo, njengesimemo sokukhathalela ngakumbi iitalente kunye namandla akho.
Ukuba ufihla into phantsi kwesigqubuthelo ephupheni, uya kufuna ngokubanzi ukufihla okanye ukhusele into ekubukeni kwabanye abantu kwinqanaba lobukhosi.
Uphawu lwephupha «Shroud» - ukutolika kokomoya
Uhlalutyo lwamaphupha agqithisileyo liguqulela "isigqubuthelo" isimboli yamaphupha njengophawu lwe ukuqonda kunye nokuncoma ukuphupha kuzisa kwelinye kwinqanaba lokomoya.